Shuruudaha isticmaalka - Finentry
Shuruudaha Adeega FINENTRY (Juun 1da, 2021/la cusboonaysiiyay)
1 Codsiga Shuruudaha Adeega
Isticmaalka adeega FINENTRY (gudaha warqaddan “Adeega”) ay soo saareen Cusbitaalka Degmadda Helsinku iyo Uusimaa (gudaha warqadda “HUS”) waxay u baahan tahay in isticmaalaha la oggolaaday ama la diiwana geliyaya (gudaha warqadda “Isticmaalaha”) uu aqbalo oo raacayo shuruudahan adeega. Isticmaalahu waxa uu u baahan yahay inuu akhriyo dhexda shuruudahan adeega si feejigan ka hor bilaabida isticmaalka Adeega.
2 Diiwaangelinta iyo Oggolaanshaha Shuruudaha Adeega.
Isticmaalahu waxa uu aqbalay shuruudahan adeega marka la oggolaaday ama diiwaan gelinta Adeega. Qod kasta ayaa iska diiwaan gelin kara Adeega. Adeega waa gaar, in kastoo Isticmaalagu sidoo kale uu ka qabsado ballanta baadhitaanka xubnaha qoyskooda dhexda Adeega.
Isticmaalaha waxa uu haystaa lambarka amniga soo shalka ee Finnishka
Marka Isticmaalahu uu diiwaansado ballanta baadhitaanka fayraska corona ee Adeega, Isticmaalahu waxa uu u baahan yahay inay xaqiijiyaan adeega iyagoo isticmaalaya soo gelida baakingan isticmaalka korontada ah ama Aqoonsiga moobaylka. Adeegu sidoo kale waxa uu oggolaadaa metelka qof xaalad kastaba qofka haysata aqoonsiyada gelida inuu meteo xaqiijinta isticmaalaha lafahooda adeeg iyagoo isticmaalaya aqoonsiyada gelida baan isticmaalka korontada ah ama Aqoonsiga moobilka, oo markaana metela Isticmaalaha. Xaalada metelka qof, xogta gaarka ah ee labbad akooxood waxaa lagu kaydin doonaa kaydka xogta ee Adeega.
Haddii Isticmaalaha ma awoodo in maro xaqiijin xoogan, waxay iska diiwaan gelin doonaan Adeega qaab isku mid ah sida isticmaalaha aan haysan lambarka amniga bulashadda Finishka.
Isticmaalaha ma laha lambarka amniga soo shalka ee Finnishka
Marka isticmaalahu ballansado ballanta baadhitaanka koronof ayraska fayraska corona ee Adeega, Isticmaalahu waxa uu u baahan yahay inuu iska diiwaan geliyo adeega isagoo isticmaalaya magaca buuxa iyo macluumaadka gaarka ah. Muddada diiwaangelinta, Isticmaalaha waxaa la siin doonaa lambarka sooshalka sirta ah, kaas oo isku mid ahaan doona mid kastaa inuu soo galo. Lambarka sooshalka amniga ku meel gaadhka ah iyo macluumaadka gaarka ah ee la bixiyay muddada diiwaangelinta waxaa lagu kaydin doonaa kaydka xogta Adeega. Diiwaanka markaa waxaa lagux aqiijiyaa lambarka xaqiijinta isticmaalka keliya ee loogu soo diro lambarka telefoonka Isticmaalaha fariin qoraal ah. Isticmaalahu waxay samaystaan eraygooda sirta ah ee u gaarka marka diiwaan gelinta. Diiwaan gelinta ka dib, isticmaalahu waxa uu soo geli karaa Adeega isagoo isticmaalaya erayga sirta ah. isticmaalahu sidoo kale waxa uu isticmaalaa lambarka xaqiijinta isticmaalka keliya ee fariinta qoraalka soo gelid kasta. Erayga sirta ee la isticmaalay si loo soo galo Adeegu waa mid gaar ah.
Isticmaalahu waxa uu u baahan yahay inuu kaydiyo eraygooda sirta ah iyo lambarka amniga sooshalka ku meel gaadhka ah uu uu sameeyay Adeegu si feejigan. Isticmaalahu waa inaanu u shaacin macluumaadkooda isticmaalaha ama erayga sirta kooxaha dibada, iyaddoo qofka wax la iska waydiinayo uu leeyaha xaqa uu ku soo galo Adeega Isticmaalaha isagoo metelaya si waafaqsan shuruudahan adeega. Isticmaalah waxa uu leeyahay masuuliyada gaarka ah ee isticmaalka ku habboon isticmaalka kootada isticmaalaha ee Adeega. Isticmaalahu isla markaab waa inuu uga warbixiyaa ururka ka masuulka ah maamulka macluumaadka isticmaalaha (HUS) xaalada Isticmaalahu uu lumiyo macluumaadkooda isticmaalaha loogu baahan yahay in la soo galo Adeega.
Isticmaalahu waxa uu leeyahay metelaada xirfadeed ee lagu qabtsado ballanta ama lagu sameeyo codsiga muunada
Haddii isticmaalaha, sabab kastaba ama sabab uun, aanu awoodin inuu isticmaalo adeega FINENTRY laftoodu, waa xirfad yaqaan ka shaqaynaya xaga goobta macluumaadka caafimaadka meesha ka gudubka xadka uu buuxin karo macluumaadka Isticmaalaha iyagoo metelaya iyaga dhexda bar kullanka xirfadadeed oo abuura codsi fudud iyo/ama lambarka sooshalka amniga ku meel gaadhka ah, ama in la qabsado ballaanta iyaddoo la matelayo Isticmaalaha wixii ah baadhitaanka korono fayraska ka dib 72 saacadood xaga goobta muunada dibada ka ah meesha xadka laga gudbayo, tusaale degmadda joogida.
Marka xirfad yaqaanku buuxiyo macluumaadka Isticmaalaha metelaadooda adeega FINENTRY, xirfad yaqaanku waxa uu ku wargelin doonaa Isticmaalka ku saabsan ujeedada macluumaadka. Isticmaalahu waxa uu aqbalaa isticmaalka iyo kaydka macluumaadka iyadodo la siiw ado macluumaadka xirfadeed ee gaarka ah ka dib barashada ujeedada la sheegay.
3 Xaqa Isticmaalka Adeega
Keliya isticmaalayaashaan ka diiwaan gashan Adeega waxay xaq u leeyihiin inay isticmaalaan kootada isticmaalaha ee Adeega. Adeega keliya waxaa loogu talo galau dadka ka wayn da’da 16.
Isticmaalka Adeegu waa bilaash. Haddii uu Isticmaalahu ballansado baadhitaanka korono fayraska corona mid ka mid ah goobaha uu qoondeeyay Adeegu, qaadista muunada, baadhitaanka iyo natiijooyinka baadhida waxay dhammaan u noqon doonaan bilaash Isticmaalaha.
Isticmaalah had iyo jeer waxa uu leeyahay masuuliyada gaarka ah ee isticmaalka ku habboon Adeega si waafaqsan shuruudaha adeega. Isticmaalahu waa inuu uga warbixiyaan HUS isla markaaba xaalada Isticmaalahu ka shakiyo in Adeega la isticmaalayo iyaddoo iyaga la metekayo oggolaanshe la’aan ama amar kasta oo kale, ama haddii kale si ku lid ah shuruudaha adeega.
4 Ujeedada Adeega iyo Isticmaalkeeda
Adeega waxaa loogu talo galau in lagu wargeliyo Isticmaalaha, siiba loogu oggolaado Isticmaalahu inuu diiwaansado ballanta baadhitaanka korono fayraska ilaa xadka ay suuragal tahay gudaha Adeega wakhti kasta oo la siiyo. Adeegu waxa uu ka kooban yahay macluumaad faa’iido badan oo ku saabsan safmarka COVID-19 oo yoolka saaraha Isticmaalaha, siiba tilmaamaha masuulka Finnishka iyo macluumaadka ku saabsan adeegyada muunad qaadida gobbolka ee ku xidhan Adeega.
Baadhitaanada korono fayraska lagu ballansaday dhexda Adeega ma bixin doonaan shahaadada baadhitaa korono fayraska goonida ah.
HUS waxay leeyihiin xaq gaar ah si go’aan looga gaadho qaybta iyo waxay ka kooban tahay Adeega la siiyay Isticmaalaha. Adeegu waxa uu u oggolaadaa Isticmaalaga inuu go’aan ka gaadho tilmaamaha aadka ugu habboon duruufahooda marka ay gelayaan Finland, siiba qorshaha jadwalada ee baadhitaanka korono fayraska marka gelida iyo qabsashada ballanka baadhida meesha ugu dhow eejaarka ah ee meesha diiwaanka iyo/ama degmadooda hadda ee joogida gudaha Finland. Adeega waxa uu u diri doonaa mida soo socota lambarka telefoonka Isticmaalaha iyaddoo la isticmaalayo fariinta qoraalka ah, fariinta xaqiijinta iyo tilmaamaha imaanshaha ee baadhitaanka, wargelinta ku saabsan ballanta baadhita iyo natiijooyinka baadhida ugu dhawaan 24 saacadood gudahood laga bilaabo baadhitaanka.
Adeega looguma talo gelin inuu beddelo cudur aqoonsashada caafimaad ama qiimaynta caafimaadka uu fuliyay xirfad yaqaanka daryeelka caafimaadku. Isticmaalaha waxa uu leeyahay masuuliyada gaarka ah ee caafimaadkooda marka ay isticmaalayaan Adeega. Isticmaalaha waxaa laga filayaa inay ku saleeyaan go’aano kasta oo la xidhiidho caafimaadkooda qiyaastooda. Isticmaalaha waa inuu had iyo jeer la xidhiidhaa dhakhtarka si uu u helo qiimaynta cafimaadka, daryeelka caafimaadka ama caawimada ka hortagga ah ee cudurka, dhaawaca ama raaxo darro kasta.
Marka la isticmaalayo Adeega, Isticmaalaha waxaa lagu wargelin doonaa wax ku saabsan dhaqamada waafaqsan Xeerka Cudurada L aisku gudbiyo ee Finnishka (1227/2016), xaalada natiijooyinka Isticmaalaha baadhitaanka Isticmaalaha korono fayrasku uu noqdo mid laga helay. Haddii Isticmaalahu uu helay natiijada baadhitaanka shaybaadhka laga helay cudurka, Isticmaalaha waxaa loo wareejiyaa inuu kala saaro diiwaanka masuuliyiinta cudurada la isku gudbiyo ee ka hawl galaysa xaga degmadda Isticmaalaha ee joogida wixii ah ujeedooyinka raad raaca waafaqsan Xeerka Cudurada La isku gudbiyo ee Finnishka (1227/2016). Xogta si toos ah looguma wareejiyo diiwaano kale oo kastra, sida diiwaanka bukaanka ee cusbitaalka degmadda ama degmooyinka, ama diiwaanada kale ee kooxaha saddexaad. Si kastaba ha ahaatee, lama xusayo in adeega FINENTRY macluumaadkiisa gaarka ah ee diiwaanka macquul ahaan loo qaybiyo labba diiwaan, diiwaanka bukaanka ku salaysan daryeelka bukaanka (baadhitaanka iyo diiwaaninta la xidhiidha baadhitaanadan) iyo diiwaanka xaalad-xaalad ah ee ku salaysan raad raaca caabuqyada. Macluumaadka labbadan diiwaan way ku xidhan yihiin oo waxaa laga soo wareejin karaa mid ilaa mid kale dhexda aragtiga la maamulay, tusaale ahaan kooxda dhexdooda masuulka ka ah baadhitaanka iyo masuuliyiinta cudurada la isku gudbiyo xaga degmadda joogida.
isticmaalahu waxa uu ka masuul yahay sax ahaanshaha macluumaad kasta oo la bixiyay oo la geliyay Adeega oo waxya ku ballanq aadayaan inuu uga warbixiyo HUS isla markiiba xaalada helida ciladai kasta ama khaladaadka ku jira macluumaadka.
Isticmaalagu waxa uu samaanad qaadayaa oo ka masuul yahay inaanu diri wax macluumaad sharci darro ah ama aan habboonayn haddii kale gudaga Adeega. isticmaalahu waxa uu u baahan yahay inuu xaqiijiyo dhammaan qaababka macquulka ah ee waxa la diray aanu ka koobanayn wax fayras ah ama haddii kale aanu waxyeelo lahayn.
5 Waxa uu ka kooban yahay Adeega iyo Adeegyada Kooxda Saddexaad
Adeega waxaa loo isticmaalaa in la wadaago macluumaadka ka yimid adeegyada kooxda saddexaad ama linkiyada adeegyada kooxda saddexaad. Adeega waxaa loo isticmaalaa in la wadaago macluumaadka saxda ah ee ku saabsan safmarka iyo ku hagida dadka ee websaydyada masuuliyiinta Finnishka. HUS kama masuul aha waxay ka koob tahay adeegyada kooxda saddexaad laakiin ujeedadeedu waxa weey in la hubiyo sax ahaanshaha dhammaan macluumaadka.
Marka Isticmaalahu diiwaansado ballanta baadhitaanka, Adeegu waxa uu u wareejiyaa lambarka amniga ee shosohalka ee Isticmaalaha ama lambarka amniga sooshalka ku meel gaadhka ah, magaca iyo lambarka telefoonka xirfad yaqaanka daryeelka caafimaadka ka hawl gala goobta qaadista muunada oo ka shaqeeya qaybta HUS ama cusbitaalka kale ee degmadda eegoboleed, ama qaybta qandaraas hoosaadlaha qandaraaseed.
Isticmaalahu waxa uu isticmaali karaa adeegyada kooxda saddexaad dhexda linkiyada ee Adeega ama haddii kale dhexda Adeega, laakiin xaaladahan, HUS maaha qandaraasida kooxda ama haddii kale ka masuul ah macluumaad kasta iyo hirgelintiisa la wareejiyay ama ay bixiyeen Isticmaalaja ama kooxda saddexaad.
6 Isticmaalka Macluumaadka Gaarka ah iyo Ka kale
Adeegu waxa uu kaydiyaa macluumaadka xasaasiga ah ee Isticmaalaha. Macluumaadkan waxaa ka mid ah lambarka amniga soo shalka ama lambarka amniga sooshalka ku meel gaadhka ah iyo lambarka telefoonka, wadanka asalka, xadka laga soo gudbay, taariikha iyo wakhtiga imaanshaha, macnaheedu waa gaadiidka iyo wax kale oo la aqoonsado iyo oo ay keenatay (tusaale, lambarka duulimaadka), degmadda iyo cinwaanka joogida, degmadda suuragalka ah ee degenaashahah iyo cinwaanka guriga, hadidi Isticmaalahu uu qabay wax astaamaha korono fayraska la xidhiidha, haddii Isticmaalahu uu ku dhawaa qofka qabay caabuqa korono fayraska lagu xaqiijiyay shaybaadhka, haddii isticmaalagu uu haysto shahaadada baadhitaanka aan cudurka laga helin wadanka asalka ah, iyo haddii Isticmaalahu uu haysto shahaadada sheegaysa ka bogsashada cudurka. Xaalad qof uu metekayo Isticmaalaha, adeegu waxa uu kaydiyaa qofkaas magaciisa iyo degmadda joogida. Isticmaalaha waxa uu gelin karaa macluumaad kasta oo uu rabo adeega ilaa intaas maadaama Adeegu awood u siiyo iyadda iyo sida loo baahan yahay ballan qabsashada baadhitaanka korono fayraska ee Adeega. Isticmaalaha waxa uu ka masuul yahay sax ahaanshaha dhammaan macluumaakda la geliyay Adeega.
Macluumaadka Adeega waxaa arki kara keliya Isticmaalaha iyo, ilaa xadka xadidan, shaqaalaha daryeelka caafimaadka xaga goobta kasta ee qaadista muunada korono fayraska, iyo hawlgalka xirfadeed xaga Qaybta Cudurka Lajala qaado gidaha degmadda Isticmaalaha ee joogida haddii isticmaalha baadhitaanka korono fayrasku uu noqfo mid aan laha helain.
Adeega FINENTRY waxa uu ku nidaamiyaa macluumaadka labba ujeedo oo kal duwan.
Xuquuqda bukaanka (diiwaanka bukaanka)
Baadhida iyo muhiim ahaan ujeedada daryeelka bukaanka, iyo macluumaadka loogu baahan yahay baadhitaanka (ay ku jiraan ballanta macluumaadka) waa macluumaadka bukaanka. Macluumaadka waa qayb ka mid ah diiwaanka bukaabka ay maamusho qaybta daryeelka caafimaadka ee bukaanka.
Diiwaanka bukaanku waxaa maamula qaybta daryeelka caafimaadka fulisa baadhitaanka. Qofka maamulayaa lama huraan ahaan isku mid maaha baadhitaanka dhexdooda gudaha dehmadda imaanshaha iyo defmadda la joogo,
Raad raaca caabuqa (diiwaanka xaalad xaalda ah)
Raad raaca caabuqu waxa uu kus alaysan yahay Xeerka Cudurada Lakala qaado, taas oo Qaybta 39 ay oggolaato ururinta iyo habbaynt amacluumaadka dadka qaaday ama looga shakisan yahay caabuqa. Macluumaadku waa qaybta diiwaanka xaalad- xaalada ah ee cusbitaalka degmadda ka masuulka ah raad raaca caabuqa.
Diiwaanka xaalad-xaalada ah waxaa maamula isbitaalka degmadda halka degmadda qofka gelaya ee imaanshaha uu ku yaalo ama halka qofka geliyaa uu joogo muddo wakhti ah.
Macluumaadka diiwaanka xaalad-xaalada ah waxaa laga soo wareejiyaa isbitaalka degmadda ilaa mid kale si toos iyaddoo ku salaysan dhaqdhaqaaqa qofka gelaya ee u dhexeeeya degmooyinka.
Cusbitaalka degmaddu waxa uu xaqiijiyaa in macluumaadka gudaha gobolkeeda loogu gudbiyo si ku filan degmadda xaalada ay samaynayaan raad raaca caabuqa ee madaxa banaan.
HUS waa habbeeya macluumaadka isticmaalaha adeega FINENTRY, halkii ay ka ahaan lahayd macluumaadka ku jira diiwaanadeed.
Adeegyada kooxda saddexaad iyo websaydyada waxay leeyihiin mabaadi;da ilaalinta xogtooda ee u gaarka ah oo ku saabxan macluumaadka gaarka ah. HUS kama masuul aha hawlgalka webseedyada kooxda saddexaad ama adeegyada.
7 Xuquuqda Lahaanshaha Garaadka ama Adeega
HUS ama kooxda saddexaad waxay leedahay hantida gaarka ah xuquuqaha dhammaan waxay ka kooban tahay gudaha Adeega, qaabka ay u taalo, iyo dhammaan qoraalada laga heli karo Adeega. Isticmaalahu waxa uu daabici karaa ama u kaydiyaa qoraal kasta oo laga heli karo Adeega wixii isticmaal gaara ah. Haddii qoraal kasta oo Adeega ah la isticmaalo si waafaqsan Xeerka Xuquuqda Daabcadaada (404/1961), ishu waxay u baahan tahay in had iyo jeer la sheego. Calaamadaha ganacsiga gudaha Adeegu dib looma soo saari karo, lama daabaco ama in dheeraad ah lama faafiyo iyaddoon lahayn oggolaanshaha qoran ee HUS.
8 Xadadka Masuuliyada
HUS waxay ku bixisaa Adeegeeda si waafaqsan mabaadi’da “sida ay tahay” iyo “sida la heli karo”. HUS ma damaana qaado in Adeega loo isticmaali karo iyaddoon la faragelin ama khalad la’aan. HUS ma damaana qaadi karto helitaanka ama khalad la’aanta Adeega. HUS kama masuul aha Isticmaalaha ama kooxaha saddexaad ee waxa uu ka kooban yahay macluumaadka lagu soo bandhigay adeega, sax ahaantooda iyo khaladaad kasta oo suuragal ah, yaraanshaha ma daabida macluumaadka, Isticmaalahu waxa uu ka masuul yahay lahaanshaha shabakada shaqada isku xidhka iyo takhasuska farsamo ee ku filan iyo sooftiweerka si loogu isticmaalo Adeega si sax ah. Isticmaalahu sidoo kale kama masuul ah badbaadada iyo shaqaynta qalabyada iyo sooftiweerka ay isticmaalaan.
Adeegu looguma talo gelin in la beddelo cudur baadhida caafimaad ama qiimaynta caafimaadka ee xirfad yaqaanka dryeelka caafimaadka, iyo HUS kama masuul aha tallaabooyin kasta oo Isticmaalu bilaabay iyaddoo ay sababtay macluumaad kasta oo lagu soo bandhigay Adeega, oo hoo simanaya shuruuda khasabka ah gudaha Sharciga.
Masuuliyada HUS waxaa loo kordhiyaa shuruudaha waajibka ah gudaha Sharciga Finnishka HUS ama Isticmaalaha kama masuul aha waxyeelada ka timaada iyaddoo ay sababtay waajibka la dayacay ee uu sababay sabab aan la arkayn ama aan caadi ahayn oo dhaafsiisan maamulka kooxda.
HUS way ka warbixin kartaa si la xidhiidha duruuf aan al saadaalin karin bogga hore ee Adeega, websaydkeeda iyo websaydyada masuuliyiinta iyo degmooyinka cusbitaalka.
9 Tirtirida Adeega
Isticmaalahu waxa uu leeyahay xaqa uu ku tirtiro ballanta baadhitaanka koronofayraska dhexda Adeega isagoo isticmaalaya lambarka tirtirida lagu soo diray fariinta qoran wakhti aan ka damabayn 3 saacadood ka hor ballanta. Xogta Isticmaalaha Adeega lagama saari karo haddii Isticmaalahu uu diiwaansaday ballanta baadhitaanka, sidi haynta xogta ku jirta diiwaanka bukaanka ee degmadda halka Isticmaalahu joogo oo isticmaalo adeegyada waxay ku salaysan tahay sharciga Finnishka (Xeerka Daryeelka Caafimaadka 1326/2010).
HUS waxay leedahay xaqa ay ku joojiso kootada Isticmaalaha ee Adeega wixii ah sababta loo cudur daaray xaalada isticmaalka Adeegu sababo waxyeelada HUS, Isticmaalaha ama kooxaha saddexaad, ama adeega haddii kale waxaa la isticmaalay iyaddoo ku lid ah adeega.
HUS waxa ay leedahay xaqa lagu joojiyo adeegyad amarka masuuliyiintu ay ku dhawaaqaan in safmarka korona fayraska uu dhammaaday. Marka adeega la tirtiro, macluumaadka Isticmaalayaasha waa la wareejin doonaa, ilaa xadka ay lama huraan tahay, meesha uu doortay maamulaha xog kasta. Qadarka macluumaadka la gudbiyay waa la soo yarayn doonaa sida ugu badan ee suuragalka ah, iyo macluumaadka waa la qarin doonaa magaca ila axadka suuragal aha si waafaqsan sharciga Finnishka. Macluumaadka aan lama huraanka haayn waa la tirtiri doonaa. Marka adeegu dhammaado, macluumaadka Isticmaalaha looma heli doono Isticmaalaha in dheeraad ah.
10 Sharciga Ku habboon iyo Madasha
Sharciga Finnishka waxaa loo adeegsadaa shuruudahan adeega/ Khilaafyo kasta oo shuruudaha adeega ah muhiim ahaan waxaa lagu xalin doonaa wada sheekaysiga u dhexeeya kooxaha. Haddii aan khilaafka la xalin karin dhexda wada hadalka, waxaa dhammayn doonta Maxkamadda Degmadda Helinki ama maxkamad kale oo degmo goobta uu degen yahay Isticmaalahu ama degenaanshaha ku meel gaadhka ah.
11 Kuukiyada iyo sooftiweerka lagu isticmaalayo websaydka
Macluumaadka guud ee ku saabsan kuukiyada lagu isticmaalay adeega
Adeega FINENTRY waxa uu isticmaalaa kuukiyada si uu u sii wado kullanka Isticmaalaha. Kuukiyada farsamada ma urursho mana kaydiyo xogta gaarka ah ee isticmaalaha. Macluumaadka kuukiga waxaa loo isticmaalaa si loo horumariyo gelida websaydka iyo waayoa ragnimada isticmaalaha, siiba ka warhaynta tirakoobka isticmaalaha.
Isticmaalah waa uu xidhi karaa kuukiyada gudaha setinka barowsarka. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka websaydka aan lahayn kuukiyada waxa uu saamayn karaa shaqadeeda.
Aalada Microsoft Azure App Insights waxaa loo isticmaalaa si looga warhayo oo looga warbixiyo ciladaha. Haddii wax cilad ah ay dhacdo nidaam kasta oo adeega ah, ka warhaynta xogta waa la isticmaali karaa si loo ogaado halka khaladka ka dhacay iyo waxa sababay.